कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वर्षासँगै भारी हिमपात जनजीवन कष्टकर सडक बन्द हवाई उडान रोकियो – Voice Samachar
बन्ने भयो नेपालमा अयोध्याधाम, छुट्याइयो १०० बिघा जग्गा
वास्तुशास्त्रः यी चीजहरु सिरानी मुनि राखेर सुत्नुस्, भाग्य चम्किन्छ
कोरोनाका कारण समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहकलाई जरिवाना नगर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन
आफ्नो मृ’त्युअघि गर्नुस् यी ५ काम, जसले मोक्ष प्राप्ती हुनेछ
लकडाउनमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका बिद्युत ग्राहकले जरिवाना तिर्नु नपर्ने
आमा बि’तिन्, बाबु भागे, ४ छोरा छोरीको बि’चल्ली
यस्ता संकेत तपाइको पार्टनरले देखाउदै छन् भने सम्झनुहोस, पार्टनरले तपाइलाई धोका दिदै छ !! (महिलाले जान्नैपर्ने)
‘सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना बढाउन मुख्य जिम्मेवार’
दुःखद खबर आईरन लगाउँदा करेन्ट लागेर १६ वर्षीया श्रेया सहित ३ जनाको मृत्यु
मुख्य पृष्ठ /News/कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वर्षासँगै भारी हिमपात जनजीवन कष्टकर सडक बन्द हवाई उडान रोकियो
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वर्षासँगै भारी हिमपात जनजीवन कष्टकर सडक बन्द हवाई उडान रोकियो
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा वर्षासँगै भारी हिमपात भएको छ। हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात भएको छ भने पहाडी जिल्लाका उच्च भागमा हिमपात र बेँसीमा वर्षा भएको छ।
बुधवारदेखि चिसो बढ्दै गएपछि बिहीबार बेलुकाबाट हिमपात भएको हो। हिमपातले हिमाली जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। हिमाली जिल्लामा वर्षासँगै हिमपात भएको छ। सुर्खेत उपत्यकामा बिहीवार बेलुकाबाट अविरल वर्षा र यहाँको रानीमत्ता लेकमा हिमपात भइरहेको छ।
हिमाली विद्यालय क्षेत्र हिमपातले ढाकिए पनि बिदा भएकाले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको छैन। त्यहाँ अहिले सबै विद्यालयमा जाडो बिदा छ। हिमाली जिल्लाको उच्च भागमा करिब पाँच फिट हिमपात भएको जुम्ला बस्दै आएका मुगुका निवासी नोर्बु लामाले राससलाई जानकारी दिए।
‘बाहिर हिउँसँगै पानी परिरहेको छ। बाहिर आउने अवस्था छैन’, लामाले भने, ‘बर्सेनि यो समयमा जाडो र हिमपात भइरहँदा बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या हुने गर्दछ।’
हिमपातको समयमा गरिब घरपरिवार, ज्येष्ठ नगारिक, सुत्केरी महिला तथा बालबालिकालाई चिसोले बढी प्रभावित पार्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका डा अर्जुनप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। यो समयमा भाइरल रुघाखोकी, निमोनिया, दमको रोगको समस्या हुने भन्दै डा तिवारीले तातोपानी खान, न्यानोमा बस्न, औषधि लिनेले नियमित सेवन गरिराख्न, झोलिलो तातोतातो चीज खान सबैलाई आग्रह गरे।
कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट र जाजरकोट जिल्लावासीको दैनिकी बढी कष्टकर बनेको पाइएको छ। जुम्ला, मुगु र जाजरकोटबाट छुट्ने लामा तथा छोटो दूरीका गाडी बन्द भएका छन्। हवाई उडान बन्द भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। मूलतः हिमपात र वर्षाले कृषक लाभान्वित हुने कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए।
चिसोमै भए पनि बिहीवार जुम्लामा छाउगोठ भत्काउने महाभियानको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिइन्। उनले सरकारी कार्यालयमा बिहीवारदेखि चिसो बढेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताइन्।
‘जुम्लाको तापक्रम करिब माइनस १० डिग्री पुगेको छ। आगो बालेर भए पनि नियमित सेवा प्रवाह हुन्छ’, उनले भनिन्।
कतिपय आकस्मिक काम यही समय हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या नहोस् भनेर कार्यालय खुला नै रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले बताइन्।
सुदूरपश्चिममा पुनः हिमपात
मौसममा आएको परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिमका अधिकांश उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातले यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षासँगै सुदूरपश्चिमका बाजुरासहित अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा बिहीवार हिमपात भएको हो। हिमपातसँगै जिल्लामा चिसो बढेको छ।
बाजुराका गौमुल, हिमाली, स्वामीकार्तिक खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र बडीमालिका नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पूर्वी उत्तरी भेगका चार स्थानीय तहमध्ये हिमाली गाउँपालिकामा रहेका विच्छ्याँ, रुगिन, बूढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टी, पाण्डुसैन र बडीमालिका नगरपालिका र बूढीनन्दा नगरपालिकामा बीचमा पर्ने पोरखे लेकमा बाक्लो हिमपात भएको छ। पोरखे लेकमा बाक्लो हिमपात भएको बडीमालिका नगरपालिका–७ का स्थानीय धनलाल पाध्यायले बताए।
यस्तै गौमुल गाउँपालिकाको दहकोट र मानाकोटमा समेत बाक्लो हिमपात भएको सोही गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। हिमपातले गर्दा बाहिर निस्कनसमेत मुस्किल भएको वडाध्यक्ष रोकायले बताए। उनका अनुसार हिमपातले चिसो बढेसँगै बस्तुभाउ स्याहारमा समेत समस्या भएको छ। गोठमा गाईभैँसी र भेँडापाठा चराउन पुगेका स्थानीय कृषकलाई समेत सामान पुर्‍याउन झनै समस्या भएको रोकायाले बताए।
सिँचाइ नभएका क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातले सिँचाइको काम गर्ने भएकाले किसान खुशी भएका छन्। हिमपात भएपछि विभिन्न रोगकिरासमेत नष्ट भएर जाने कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले जनाएको छ।
लेकाली भेगका ठाउँमा चिसोबाट बच्न सतर्कता अपनाउन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी समीर भण्डारीले आग्रह गरे। उनले चिसोबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने भएकाले आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताए।
पूर्वी क्षेत्रका चार स्थानीय तह र तल्लो क्षेत्रका गौमूल गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रका विद्यालय हिमपातका कारण पूर्णरूपमा बन्द भएका छन्। हिमपातले चिसो हुने भएकाले बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले विद्यालय नै बन्द भएका हुन्।
अधिकांश विद्यालयमा तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। वर्षा र हिमपातका कारण विद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका परीक्षासमेत प्रभावित हुने मालिका नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज पाध्याले बताए। चिसोले विद्यार्थीलाई समस्या हुने भएकाले परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने हुनसक्ने प्रधानाध्यापक पाध्यायको भनाइ छ। रासस
चितवनमा ५ महिने बालकमा पनि देखियो कोरोना, थप ५२ जना संक्रमित
अमेरिकी डलरको मूल्य ११७ रुपैयाँ ३६ पैसामा कायम, के छ अन्य देशको हेर्नुहोस्
नेपालमा पाइने चरामध्ये गुल्मीमा मात्रै २५ प्रतिशत
साउनको पहिलो सोमबार खुल्यो अर्जुनधारा धामको प्रवेशद्वार
मंगलबार भगवान गणेशको पूजा कसरी गर्ने ? (पूजाविधि सहित)